Mytelတာဝါတိုငျတှဖေကျြဆီးလို့အငျတာနကျမရရငျဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတဲ့သူတှကေိုပနျဆယျလိုဒဲ့ပွောပွီ – Shwe Nay Chi
MyTel တာဝါတှထေိတော့ MaALoe ကွီးမငျးအောငျလှိုငျအပွငျ အသံထှကျလာတာက ဘောခိုးမလေးတှပေဲ။စဈတပျကို လုပျပါလား…. တာဝါတှထေိရငျ ပွညျသူတှပေဲ နဈနာတာတဲ့။….အငျတာနကျမရတော့ရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲပေါ့။ လာလာသေး… တာဝါတိုငျတှကေ ပွညျသူပိုငျတဲ့။ ဘယျလို ပွညျသူပိုငျတာလဲ နားမလညျလို့။ အံ့ဩပ။
အငျတာနကျမရတော့ရငျဆိုတာလေး အရငျပွောတာပေါ့။ MyTel မရရငျ အခွားOperator သုံးလေ။MyTel ပဲ မိလို့ဆိုတဲ့သူတှအေတှကျတော့ စိတျမကောငျးပမေယျ့ အဲ့ဒီ့အနညျးစု အငျတာနကျမရတာအတှကျ စဈကောငျစီရဲ့ ငှပေငျငှရေငျးကို ဆှဲမနှုတျဘဲ ပွညျသူတှကေိုသတျဖို့ လကျနကျဖိုး ဆကျပေးနရေမှာလား။သူတို့ပိတျခငျြ ဇကျခနဲပိတျလို့ရတဲ့ အငျတာနကျကို အနညျးစု မရနိုငျတာနဲ့ မလုပျနဲ့ဆိုတော့ တကယျဖွဈလာရငျ အိမျမှာ ဖုနျးထိုငျပှတျလို့ရမယျ ထငျနတောလား။
Boycott လုပျပါဆိုတော့ မကော့ဘူး။ MyTelက ဘယျလိုအလကားပေးတာ၊ ဘယျလိုဈေးခြိုတာဆိုပွီး အကွောငျးပွခကျြပေါငျးစုံနဲ့ သုံးတယျ။Boycott ပါဆိုတဲ့လူတှကေပဲ အစှနျးရောကျနသေလိုလို၊ အာပှနသေလိုလို လှောငျသေး။ အခု အသံထှကျလာတာ အဲ့လိုဟာတှေ။….တာဝါတိုငျတှေ ထိရငျ ပွညျသူနဈနာတာတဲ့။တာဝါတိုငျတှကေ ပွညျသူပိုငျတဲ့။ ဘာလဲ… အဲ့တာဝါတိုငျ ၂၂၀၀ ကြျောက စက်ကနျ့မလပျရနတေဲ့ ဝငျငှတှေကေ အစိုးရဘဏ်ဍာ ဖွဈလို့လား။ ပွညျသူ့အိပျကပျထဲ ရောကျလာဖူးလား။တာဝါတိုငျတှကေ ပွညျသူမပိုငျဘူး။ ကုမ်ပဏီပိုငျဟဲ့။
တဈတိုငျ သိနျးထောငျခြီတနျတယျ။ ကုမ်ပဏီက MyTel, ဗီယကျနမျကုမ်ပဏီ VietTel နဲ့ MaALoe မငျးအောငျလှိုငျတို့ အတူပိုငျတာ။တာဝါတိုငျတှကေို အာမခံထားတာ မငျးအောငျလှိုငျသား အောငျပွညျ့စုံရဲ့ အောငျမွငျ့မိုရျမငျးအာမခံကုမ်ပဏီ။တာဝါတိုငျထိရငျ ဘယျကောငျနာလဲ စဉျးစား။ ပွညျသူတှနောမယျပွောတဲ့ စောကျပေါကျကွီးတှေ ပွနျစဉျးစား။….
နငျ့မငေခွောကျဖုတျလို ပွညျသူနာမှာလား။ လိလိလားလားနဲ့။လကျနကျမဲ့ပွညျသူတှခေေါငျးကို တပေ့ဈတယျ။ စောကျသံမထှကျဘူး။……ပွညျသူတှကေို မတရားဖမျးဆီးထောငျခတြယျ။ေ လသံတောငျမဟဘူး။ ပွညျသူပေါငျးသနျးပေါငျးမြားစှာ ဘဝတှပေကျြတယျ။ ခပျတညျတညျပဲ။ MyTel တိုငျထိမှ အငျတာနကျ ပွတျမှာစိုးလို့ဆိုတော့
MyTel တာဝါတွေထိတော့ MaALoe ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပြင် အသံထွက်လာတာက ဘောခိုးမလေးတွေပဲ။စစ်တပ်ကို လုပ်ပါလား…. တာဝါတွေထိရင် ပြည်သူတွေပဲ နစ်နာတာတဲ့။….အင်တာနက်မရတော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ လာလာသေး… တာဝါတိုင်တွေက ပြည်သူပိုင်တဲ့။ ဘယ်လို ပြည်သူပိုင်တာလဲ နားမလည်လို့။ အံ့ဩပ။….အင်တာနက်မရတော့ရင်ဆိုတာလေး အရင်ပြောတာပေါ့။ MyTel မရရင် အခြားOperator သုံးလေ။
MyTel ပဲ မိလို့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပေမယ့် အဲ့ဒီ့အနည်းစု အင်တာနက်မရတာအတွက် စစ်ကောင်စီရဲ့ ငွေပင်ငွေရင်းကို ဆွဲမနှုတ်ဘဲ ပြည်သူတွေကိုသတ်ဖို့ လက်နက်ဖိုး ဆက်ပေးနေရမှာလား။သူတို့ပိတ်ချင် ဇက်ခနဲပိတ်လို့ရတဲ့ အင်တာနက်ကို အနည်းစု မရနိုင်တာနဲ့ မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ တကယ်ဖြစ်လာရင် အိမ်မှာ ဖုန်းထိုင်ပွတ်လို့ရမယ် ထင်နေတာလား။…..Boycott လုပ်ပါဆိုတော့ မကော့ဘူး။ MyTelက ဘယ်လိုအလကားပေးတာ၊ ဘယ်လိုဈေးချိုတာဆိုပြီး အကြောင်းပြချက်ပေါင်းစုံနဲ့ သုံးတယ်။
Boycott ပါဆိုတဲ့လူတွေကပဲ အစွန်းရောက်နေသလိုလို၊ အာပွနေသလိုလို လှောင်သေး။ အခု အသံထွက်လာတာ အဲ့လိုဟာတွေ။….တာဝါတိုင်တွေ ထိရင် ပြည်သူနစ်နာတာတဲ့။တာဝါတိုင်တွေက ပြည်သူပိုင်တဲ့။ ဘာလဲ… အဲ့တာဝါတိုင် ၂၂၀၀ ကျော်က စက္ကန့်မလပ်ရနေတဲ့ ဝင်ငွေတွေက အစိုးရဘဏ္ဍာ ဖြစ်လို့လား။ ပြည်သူ့အိပ်ကပ်ထဲ ရောက်လာဖူးလား။တာဝါတိုင်တွေက ပြည်သူမပိုင်ဘူး။ ကုမ္ပဏီပိုင်ဟဲ့။….တစ်တိုင် သိန်းထောင်ချီတန်တယ်။ ကုမ္ပဏီက MyTel, ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီ VietTel နဲ့ MaALoe မင်းအောင်လှိုင်တို့ အတူပိုင်တာ။
တာဝါတိုင်တွေကို အာမခံထားတာ မင်းအောင်လှိုင်သား အောင်ပြည့်စုံရဲ့ အောင်မြင့်မိုရ်မင်းအာမခံကုမ္ပဏီ။တာဝါတိုင်ထိရင် ဘယ်ကောင်နာလဲ စဉ်းစား။ ပြည်သူတွေနာမယ်ပြောတဲ့ စောက်ပေါက်ကြီးတွေ ပြန်စဉ်းစား။….
နင့်မေငခြောက်ဖုတ်လို ပြည်သူနာမှာလား။ လိလိလားလားနဲ့။လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေခေါင်းကို တေ့ပစ်တယ်။ စောက်သံမထွက်ဘူး။……ပြည်သူတွေကို မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချတယ်။ေ ​လသံတောင်မဟဘူး။ ပြည်သူပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာ ဘဝတွေပျက်တယ်။ ခပ်တည်တည်ပဲ။ MyTel တိုင်ထိမှ အင်တာနက် ပြတ်မှာစိုးလို့ဆိုတော့
မရောကျတာကွာတဲ့ရှာကိုပွနျအရောကျမှာ ကိုယျ့အုတျဂူကိုကိုယျ ပွနျတှခေဲ့ရတဲ့သူ
မိခငျဖွဈသူအတှကျဆိုပွီး လိုငျးပျေါကနေ သှားတုလေးတဈစုံ မှာယူခဲ့ရာ ပစ်စညျးရောကျလာခြိနျမှာတော့ ရယျရမလိုငိုရမလိုဖွဈသှားခဲ့သညျ့ မိနျးကလေး